NetEnt Gaming dia mankalaza ny faha-20 fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ary ny fampidirana ny sasany sy ny endri-javatra vaovao-manan-karena amin'ny aterineto finday slots in NetEnt Rock andian. Guns N Roses got a huge response from the players and now is the time to check out Jimi Hendrix, ny vaovao slot lalao mandroso amin'ny NetEnt Gaming.
Zavatra tsy mahagaga slot finday lalao fanafahana amin'ny 22 Aprily, 2016. Izany dia mampino lalao amin'ny NetEnt natokana ho lehibe mozika ny taona 1960. Eny, isika miresaka momba ny tsy iza fa ny malaza mpiangaly mozika Jimi Hendrix. Ity lalao ity dia manana maso hijery sary, nitaona tombony lafin-javatra sy ny tsara indrindra Soundtracks ny Jimi Hendrix. Aoka ny mahita bebe kokoa momba izany fialam-boly mahafinaritra vola lalao.
Tapaka ny loha-hevitra sy ny lalao-tsehatra hiseho:
Jimi Hendrix slot ho 5×3 miraingiraingy azon'ny slot lalao amin'ny 20 raikitra Bet-dalana,. Ity lalao ity no hanome anareo ny sehatra tonga lafatra mba milalao miaraka amin'ny endri-javatra maro namoly malalaka. Mpilalao dia afaka maka ny tsara indrindra mba handresy fomba lehibe kokoa vola. Ankoatry ny, misy tombony vaovao endri-javatra roa nampidirin'i NetEnt hanandra mpilalao liana tamin'ny lalao.
Ny foto-kevitra dia manaitra satria toa 60 'Retro fomba lohahevitra. Miloko volomparasy sy mavokely fototra, avo-kilasy 3D sary sy Jimi Hendrix ny malaza Soundtracks manao io lalao faran'izay mampientam-po. The symbols are perfectly designed for the theme; dia ahitana fotsy gitara, mena gitara, Jimi Hendrix, voninkazo, fihavanana famantarana sy ny fo. Rehetra ireo dia avo-danja fanehoana an'ohatra, izay tsy maintsy-tanety isaky ny kofehy ireny mba handresy ny sasany nahazoan-dalana lehibe.
Free spins sy ny tombony endri-javatra:
Ny endri-javatra kofehy ireny maimaim-poana ao amin'ny Jimi Hendrix slot lalao dia ho tena mitovy amin'ny tombony kodia endri-javatra ny Guns N Roses. Mety hahazo misy ny ambany nomena maimaim-poana kofehy ireny endri-javatra:
Crosstown Traffic: ny lalao no hamaly soa anao amin'ny 6 spins maimaim-poana miaraka amin'ny tampon-tanety ny lehibe sasany Fandresena.
Little elatra: tany 3 ny izy ireo ary any no handeha amin'ny malalaka spins. Afaka mahazo 6 ny 12 azy.
Purple Haze: Ny mpilalao dia mahazo vola 6 ny 12 maimaim-poana spins ary hisy volomparasy setroka tampon-tanety isaky ny namoly.
Coin loka: Ianao manangona vola madinika, ianao ao ny sasany kisendrasendra multipliers. Ny sasany amin'izy ireo dia mety ho toy ny lehibe tahaka ny 30x.
Re-spins sy volomparasy setroka kisendrasendra tampon-tanety:
Ny bibidia marika dia afaka tany misy miraingiraingy azon'ny ary indray mandeha izany tany izy, izany dia afaka soloina ny sisa rehetra tamin'ny bibidia marika famantarana. Noho izany, ny mpilalao mahazo tsara kokoa filaharany fandresena ho fandresena lehibe kokoa. Fa ity lalao ity dia manana ny heviny. Nitody efatra na mihoatra mena gitara dia mety ho tena mangatsiaka, satria toy izany no afaka mandresy ny sasany indray-spins. Ny gitara stacked ho dity sy ny fanehoana an'ohatra ny miraingiraingy azon'ny dia mihodina. Afaka mahazo ny tsara kokoa fisesin-marika izay rehetra azontsika atao mba hahazo ny loka ity lalao.
Izany dia teorika RTP ny 96.1%. Miaraka maro ahodiny any amin'ny lalao kilalao, mpilalao dia afaka foana ny liana mainka. The Rock andiany efa nanolotra ny mahatahotra lalao, Guns N Roses. Ary Jimi Hendrix dia tsy maintsy lehibe kokoa sy tsara kokoa !